Imiqathango kunye neemeko zokuThengiswa kwe-Forex I-Trading Forex elula nje ngeFXCC
Imigaqo neMeko yeFXCC
FUNA UKUFUNDA LWEEMITHETHO NEMIGAQO NGOKWENZA.
UKUFUMANA KWE SIWEBHU YEBHIZE UYAVUMELWA UKUFUNYWA NGEMIGAQO NEEMIGAQO EZIQHELEKILEYO KUNYE KWENKQUBO YENKCAZELO KUNYE NEMIBUZO NGOKWENZA. I-FXCC IQHUBELA Ilungelo lokutshintshela le miqathango kunye nemiqathango kwixesha elilodwa ngaphandle kweSaziso. UNGAKHONA KUNYE UKUQHUBEKA NGOKUQHUBEKA OKUQHUBEKILEYO KWEEMITHETHO NEMIGAQO. UKUSETYENZISWA KWE SITE NGOKUBA NGOZI ZINTSHINTSHO ZOKUBA UKUBA UKUVUMELWA KWAKHO UKUTYENZISWA KWEZINTU EZINTSHA. UKUBA UNGAKHULU NEMITHETHO NEMIGAQO, FUNEKA UKUFUMELELE LE WEBSITE.
I-FXCC inayo kwaye igcina le sayithi. Akukho senzo sokukhuphela okanye ukukopisha okuvela kule sayithi kuza kudlulisela isihloko kuye nayiphina isofthiwe okanye izinto ezivela kule ndawo ukuya kuwe. Nayiphi na into oyithumela kule sayithi ibe yipropati ye-FXCC, inokusetyenziswa yiFXCC nayiphi na injongo esemthethweni, kwaye iphinda ixhomekeke ekudaleni njengoko ibonwe yiFXCC, kubandakanywa nawaphi na amagunya omthetho okanye alawulayo apho iFXCC ihambelana nayo. I-FXCC igcina onke amalungelo ngokubhekiselele kubunikazi be-copyright kunye nomnini-mveliso wezinto eziphathekayo kule ndawo, kwaye iya kubeka inyanzelisa loo malungelo ngokubanzi ngokomthetho.
Izinto eziqulethwe kwiwebhsayithi, kubandakanywa kodwa engaphelelwanga kuyo yonke idizayini, itekisi, iividiyo, ukurekhoda kwesandi, kunye nemifanekiso, ziphantsi kwayo, ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela, ngeFXCC. Ngaphandle kokuba kuboniswe ngenye indlela apha, abanakho ukukopishwa, ukuhanjiswa, ukuboniswa, ukuhanjiswa, ukuhanjiswa (ukwenzela ukuhlawulwa okanye enye into), ilayisenisi, iguqulwe, ifakwe, igcinwe ukusetyenziswa okulandelayo, okanye isetyenziswe ngokupheleleyo okanye inxalenye nayiphi na ngaphandle Imvume ebhalwe phantsi yeFXCC.
Le sayithi kunye nolwazi, izixhobo kunye nezinto ezikuyo azibhekiselele kuyo, okanye zijoliswe ekuhanjisweni okanye kusetyenziswe, nayiphi na umntu okanye iqumrhu elommi okanye ohlala kuyo okanye elikuyo nayiphi na igunya apho ukuhanjiswa, ukupapashwa, ukufumaneka okanye ukusetyenziswa kuya kuchasene nomthetho okanye umgaqo okanye oya kubeka phantsi iFXCC okanye abo babambene nayo nayiphi na imfuneko yobhaliso okanye ilayisenisi ngaphakathi kwaloo mandla.
UKUKHULULELA KWAMARARANTY NOKUKHALWA KWEENKQUBO
Ingcaciso kule ndawo inikezwa "Njengaye". I-FXCC ayifuni ukuba ukuchaneka kwezixhobo ezibonelelwe apha, ngokucacileyo okanye ngokucacileyo, nayiphi na injongo kwaye ikhupha ngokucacileyo nayiphi na imirhumo yokuthengisa okanye ukufaneleka kwinjongo ethile. I-FXCC ayiyi kuba noxanduva lokulahleka okanye umonakalo onokubangela ukusuka kwamanye amaqela kwanoma yiluphi ulwazi olwenziwe kuwe ngale ndawo. Nangona ulwazi olunikezwe kuwe kule ndawo lufunyenwe okanye luhlanganiswe kwimithombo esiyakholelwa ukuba lunokwethenjelwa, i-FXCC ayikwazi kwaye ayiqinisekisi ngokuchanekileyo, ukuqinisekiswa, ixesha okanye ukugqiba kwayo nayiphi na ulwazi okanye idatha eyenziwe kuwe ngenjongo ethile. Ayikho i-FXCC, nabani na abachaphazelekayo, abalawuli, amagosa okanye abasebenzi, okanye nabathengisi bentengiso abathathu baya kuba noxanduva okanye banayo nayiphi na imbopheleleko nayiphi na inkunkuma okanye umonakalo owenzayo xa kwenzeka nayiphi na ukuhluleka okanye ukuphazamiseka kwesi siza, okanye ngenxa yezenzo okanye ukungaphumeleli kwanoma yimuphi na umntu obandakanyekayo ekwenzeni le ndawo okanye idatha equlethwe kuyo, okanye nakweyiphi na isizathu esichaphazela ukufikelela kwakho, ukungakwazi ukufikelela okanye ukusebenzisa isiza okanye ezi zinto, nokuba okanye kungeko iimeko ezinikezelayo kubangelwa ukuba zilawulwe yiFXCC okanye nayiphi na umthengisi onika isofthiwe okanye inkxaso yenkxaso.
Ngaphantsi kweemeko ziza kuhlawulwa i-FXCC nayiphi na into efanelekileyo, eyenzekayo, eyimfuneko, isohlwayo okanye umonakalo ovela kuyo nayiphi na ukusebenzisa okanye ukungakwazi ukusebenzisa le ndawo okanye nayiphi na isahlulo sayo, kungakhathaliseki ukuba iFXCC iye yafundwa ngethuba lokulimala okwenzekayo kwaye kungakhathaliseki ukuba yintoni isenzo, nokuba kuKontrakethi, kuTort (kuquka ukunyaniseka), uxanduva olunzulu, okanye ngenye indlela.
Ulwazi olukule ndawo lujoliswe kwiinjongo zolwazi kuphela. Ngako oko akufanele kuthathwe njengento yokunikela okanye ukucela kunoma yimuphi umntu kunoma yimuphi ummandla apho unikezelo okanye unxusa ungegunyaziwe okanye kunoma yimuphi umntu okungekho mthethweni ukuba enze eso sipho okanye ukucela, angathathwa njengengcebiso athenge, uthengise okanye ngenye indlela abhekane nayo nayiphi na imali yotyalo-mali. Ucebise kakhulu ukuba ufumane utyalo-mali oluzimeleyo, ulawulo lwezezimali, lomthetho kunye nerhafu ngaphambi kokuba uqhube nayiphi na imali. Akukho nto kule ndawo kufuneka ifundwe okanye ikhethwe njengengcebiso yezolimo-mali kwicandelo le-FXCC, okanye nayiphi na idibeneyo, abalawuli, amagosa okanye abasebenzi.
Ubume botyalo-mali kwiiMpahla zeMali kukuba akunjalo zonke izixhobo zeMali zifanele wonke umntu ngaphandle kokuba:
abanolwazi kwimicimbi yotyalo-mali,
banako ukunyamekela umngcipheko woqoqosho lotyalo-mali,
ukuqonda ingozi ebandakanyekayo; kwaye
bakholelwa ukuba utyalo-mali lufanelekile ngenjongo ethile yokutshala imali kunye neemfuno zezemali.
Ukuba kukho nawuphi na umtyalo-mali ongeyena utyalomali kwiiMpahla zeMali, kuyacetyiswa ukuba kuphela isahluko se-investor ofuna ukutyalomali ixesha elide kufuneka sityalwe.
Kukwacetyiswa ukuba bonke abatyali-mali bafanele bafune iingcebiso kumcebisi-mali wobugcisa ngaphambi kokuba benze nayiphi na imali-mali kwiiMpahla zeMali.
XHUMA KWAMANYE AMASITI
Iziqhagamshelwano kwiiwebhusayithi ze-FXCC zinikezelwa kuphela njengezikhombisi-nkcukacha kwizinto ezinokubaluleka kubasebenzisi be-website ye-FXCC, kwaye i-FXCC ayikwazi ukulawula umxholo kwiiwebhusayithi ezingekho kwi-FXCC. Ukuba ukhetha ukudibanisa kwiWebhsayithi engalawulwa yiFXCC, i-FXCC ayinakuqinisekisa ukuba i-warxties, okanye ichazwe, ngokubhekiselele kumxholo weso siza, kubandakanya ukuchaneka, ukugqiba, ukuthembeka, okanye ukufaneleka kwayo nayiphi na injongo ethile, kwaye iFXCC ayiyiqinisekiso ukuba eso siza okanye umxholo akhululekile nakwiyiphi na ibango le-copyright, uphawu lokuthengisa okanye olunye uphotho lwamalungelo abantu besithathu okanye ukuba loo ndawo okanye umxholo awunayo i-virus okanye enye ingcola. I-FXCC ayiqinisekisi ubungqina bamaxwebhu kwi-intanethi. Iziqhagamshelwano kwiindawo ezingezizo ze-FXCC azichazi naluphi na ukugunyazwa okanye uxanduva lwezimvo, iingcamango, iimveliso, ulwazi, okanye iinkonzo ezinikezelwa kwiindawo ezinjalo, okanye nayiphi na imbeko malunga nomxholo kwiindawo ezinjalo.
Ukuba unxibelelana neFXCC nge-imeyile, kufuneka uqaphele ukuba ukhuseleko lwe-intanethi nge-imeyli aluqinisekanga. Ngokuthumela imiyalezo ye-imeyile engabonakaliyo okanye eyimfihlakalo engabhalwa nge-encrypted uyamkela ingozi yokungaqiniseki okunjalo kunye nokungabikho kobumfihlo kwi-intanethi. I-Intanethi ayikho i-100% ephephile kwaye umntu unokukwazi ukuwamkela nokufunda iinkcukacha zakho.
Naluphina ulwazi olusisinika lona luya kuthathwa njengeyimfihlo kwaye lukwabelwana kuphela kwiNkampani, abambisene nabo kunye nabalingani bayo bezoshishino kwaye abayi kuchazwa kunoma yimuphi umntu wesithathu ngaphandle kweyiphi na inkqubo yokulawula okanye yomthetho. Iinkqubo zokulandelela iWebhsayithi zingabutha kwakhona iinkcukacha ezibonisa iphepha oye wafikelela kuzo, indlela ofumene ngayo le ndawo, ukuphindaphindiweyo kokutyelela njalo njalo. Ulwazi olufunyenweyo lusetyenziselwa ukuphucula umxholo webhsayithi yethu kwaye lunokusetyenziswa kuthi siqhagamshelane nawe, nangayiphi na indlela efanelekileyo, kwaye sikunike naluphi na ulwazi esinokukholelwa lunokuba luncedo kuwe.